Gabadh Soomaaliyeed oo duqeyn qoyskeeda loogu gaystay Suuriya keligeed ka badbaaday | Saxil News Network
Gabadh Soomaaliyeed oo duqeyn qoyskeeda loogu gaystay Suuriya keligeed ka badbaaday
Sida uu baahiyay Telefishinka CTV News ee xaruntiisu tahay Toronto ee dalka Kanada,ayaa waxa ka soo muuqday sawirka gabadh yar oo afar jir ah, laguna magacaabo Amira oo dhamaan waalidkeed lagu dilay duqeymaha lagu bartilmaameedsanayo ururka IS.
Adeerkeed oo siiyay wareysi CTV ayaa codsanaya inay dawlada Kanada ka caawiso sidii looga soo qaadi lahaa gabadhan yar dalka Suuriya oo loo keeni lahaa Kanada si ay ula noolaato.
Amira loo gudbiyay xero qaxooti oo ku taalla Bariga Suuriya,waalidka dhalay Amiira ayaa ugu socdaalay dalka Siiriya si ay uga barbar dagaalamaan kooxda ISIS,waxayna ka socdaaleen dalka Kanada.
“Waxa laga helay waddada dhinaceeda kaligeed ,waxay sheegtay in qofwalba uu dhulka yaallay,wayna welwelsanayd,qof ayaa helay oo keenay xerada” sidaas waxa CTV u sheegay gabadha adeerkeed o ka gaabsaday in magaciisa la sheego.
Amiira adeerkeed ayaa isku dayay sidii u u keeni lahaa Kanada tan iyo markii loo soo diray sawirka naxdinta leh ee gabadha uu walaalkii dhalay.
Sawirkan ayaa muujinayay gabadh yar oo dhoola cadaynaysa,waxayna xirnayd Shaadh Huruud ah oo fadhida dhinaca shandadaha dhabarka lagu qaato, waxay u muuqatay in nabar xoqon kaga yaallo fooda wajiga hore, sida uu sheegay adeerkeed.
” Waxan ka naxsanahay caafimaadkeeda iyo amaankeeda,waa afar jir,waa ilmo yar,ma oga in aanu jirno,waxay u haysataa in dhamaan qoyskoodii dhinteen,in ay jiraan edo, adeer,awoow iyo ayeeyo iyo ilmaadeer jecel iyada oo ay kuwaas sugayaan inay arkaan”
Al-Hawl waa xero qaxooti oo hoy u ah dad gaaraya 40.000 oo qof,kuwaas o ay ku jiraan qoysasakii dagaallamayashii ISIS ee laga adkaaday,warbixinadii u danbeeyey ayaa sheegaya in bilihii u danbeeyay ay xeradani dad badan yimaadeen.
“Waa kaligeed”adeerkeed ayaa yiri”majiro qof kale oo ka caawin kara baahiyaheeda gaarka ah, xaalada halkaas way adag tahay.”
Amiira adeerkeed ayaa sheegay in u wajahay caqabado badan sidii uu u keeni lahaa Kanada, Amiira waxay ku dhalatay Suuriya,,waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo Hida sidaha DNA si loo caddeeyo in waalidkeed yihiin muwaadiniin Soomaali Kanadiyaan ah, sidoo kale ay u abaahan tahay Amiira in ay sii hesho sharci ay ku soo socdaasho.
Amiira Adeerkeed ayaa sheegay in mudada la baarayo Hido sidaha DNA ay qaadanayso 6 bilood.
“Waan samaynaya wax walba oo aan ku baddali karo xaalada ay ku jirto Amiira sidii ay uga bixi lahayd xaalada adag,” wuxuu sheegay” in uu qorsheeyey naftiisa in uu ugu tego xerada oo u soo kaxeeyo.”
Gabadh dhalatay 7 sano kadib geeridii aabaheed
Ilmo tareen ku dhex dhashay oo abaalmarin helay
Kanada ayaa hore u sheegtay in xaalad amni darro ah ay ka taagan tahay xerada Al-Hawl , waxayna sidoo kale ku dadaaleysaa sidii looga soo saari lahaa muwaadiniinta kaga jirta xeradaasi, balse horraantii bishan Faransiiska iyo Dhajka ayaa diyaariyay qorshe ay ku soo kaxaynayaan tiro badan oo ah agoomaha ku jira xeryahaasi ee ka soo jeedo dalalkooda.
” Waxan la yaabanahay sababta dalal badan ay dadkooda halkaas uga soo saareen oo ay dawladaydu ay ku ilowday Amiira,” sidaas waxa yiri Adeerka gabadhan yar.
CTV News oo wax ka waydiiyay kiiska Amiira laanta socdaalaka Kanada ayaa helay in arrinkan lo gudbiyay wasiirka socdaalka Kanada.
Bilahan danbe, waddamada Sweden, Jarmalka iyo Mareykanka ayaa bilaabay in ay muwaadinintooda ka soo celiyaan xeryahaasi